Shacabka Congo oo u dareeray codaynta doorashada madaxwaynaha – Radio Daljir
Diseenbar 30, 2018 8:39 b 0
Codbixiyeyaasha dalka Congo ayaa u dareeray goobaha codbixinta maanta oo Axad ah, taasi oo noqonaysa mid qaabaysa mustaqbalka dalkaasi oo ay dagaalo sokeeye ey la dageen, inkasta oo ay jirto baqdin la xiriirta qalalaase hareeya doorashada.
Malaayiin ka mid ah shacabka dalka Congo ayaa dooranaya hogaamiyaha cusub, kadib markii uu laba sano kahor iska casilay madaxwaynihii wadankaasi .
Doorashadan ayaa fursad u siinaysa shacabka Congo inay arkaan markii u horaysay ee wadankaasi tan iyo xornimada markii uu ka qaatay dalka Biljamka 1960kii kadib awoodda qaab nabad galyo ah la isku wareejiyo.
Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya inay jirto khataro badan oo dalka uu wajahayo, iyadoo laga walaacsanyahay inuu ku shubto hogaamiyaha hadda xilka ka dagaya Josiph Kabilla.
Mareykanka iyo Soomaaliya oo howlgal ka fuliyay xarunta ugu wayn ee Al-shabaab